किन बढिरहेको छ रक्तचाप, नियन्त्रण गर्न के गर्ने ? | SwasthyaNews.Com Nepal's Leading Health News Portal
किन बढिरहेको छ रक्तचाप, नियन्त्रण गर्न के गर्ने ?
बिहिबार, ०३ जेठ २०७५
सोफिया उप्रेती, न्युट्रिसियनिस्ट
नुनिलो र सोडियमयुक्त खानु भन्दा आफ्नै घरमा बनाएको ताजा र हेल्दी खाना खाने हो । पोषिलो खानाको विभिन्न थरिका खानुपर्छ । प्याकेटका बनेर आएका चिज खान बन्द गर्नु पर्छ। घरको काम गर्ने, दैनिक एक घण्टा कसरत गर्ने र हिँडहुल गर्ने हो भने पनि उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ।